PARIJATMEDIA - Page 142 of 156 - Updating Nepali
महिलाकाे उमेर अनुसार कस्ताे यौ’न चाहना
पाेखरा ६ माघ- कुन उमेर महिलामा याै’न चाहना वढी हुन्छ भन्ने काै’तुहल’ता धेरै पुरुषमा हुने गर्दछ । त्यसैले पुरुषहरुलाई लक्षित् गर्दै नयाँ नयाँ सर्वेक्षण हुने गर्दछ । भिटामिन कम्पनी हेल्थ स्पानले ल्याएको यो नयाँ रिर्पोटले यस्तो यस्तो जानकारी गराएको छ । बियुटिफुल कप्पल मेन/उमेन ५८४९२ उक्त सवर्वेक्षणले २० वर्ष उमेरभित्रक महिलाहरुमा यौ’न चाहना उच्च रहने सार्बजनिक गरेको छ । यसअघि महिलाहरु ३५ देखी ४० वर्षसम्म महिलाहरु यौ’न सम्बन्ध राख्नका लागि लालयित हुने गर्रदछन । त्यतिबेला उनीहरुमा सम्बन्धलाई लिएर उच्च आ’त्मविश्वास तथा इच्छाशक्ति रहने जनाइएको थियो । नयाँ सर्वे’क्षणले उमेर बढ्दै गएसँगै महिलाहरुले बेडरुममा असुरक्षित महसुस गर्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ । बढ्दो उमेरसँगै महिलाहरु आफूलाई नराम्रो ठान्ने गर्दछन् । त्यस्तै २० वर्षसम्म उनीहरुसँग यौ’न शक्ति पर्याप्त रहने पनि सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । नयाँ
अचम्मको जागिर, युवतीलाई अँगालो हालेर सुताउनेलाई एक घण्टाको ८ हजार तलब
सुन्दा सबैलाई चकित पार्ने एउटा जागिर । जसले हरेकलाई सुन्दैमा पनि चम्म पार्छ । दनियाँमा कस्ता कस्ता जागिरहरु हसुदो रहेछन् । एउटा यस्तै जागिरको अवशर अमेरिकामा आएको छ । यो जागिर अमेरिकाकी एकजना महिलाले ल्याएकी हुन् । उनले अंगालो मारेर सुताएको एक घण्टाको करिब ८ हजार रुपैया दिन्छिन् । पछिल्लो समय ती महिला इन्टरनेटमा भाइरल बनिरहेकी छन् । उनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ओछ्यानमा केवल अंकमाल गरेर सँगै सुत्छिन् । निकै प्रेमभावमा अंकमाल गरेर सुताएबापत उनले प्रतिघण्टा ८० डलर अर्थात् झण्डै ८ हजार शुल्क लिन्छिन् । अमेरिकाको केनजस सहरकी ती महिलाको नाम मेरी हो । मानिसहरुलाई अंकमाल गरी आलिंगनमा राखेर सुताएकै भरमा उनले वर्ष दिनमा झण्डै २० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम कमाउँदै आएकी छिन् । मेरी एकजना व्यवसायिक सुसारे हुन् । उनले आफ्नो त्यो अनौठो सर्भिसद्वारा ग्राहकहरुलाई रिल्याक्स महसूस गराउँदछिन् । उनका अनुसार यसो
के महिलाको पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ ?
मानव यौ’न प्रतिक्रिया चक्रका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । यसका चरणहरू १. उ’त्तेजनाको चरण, २. Plateau चरण, ३. चर’मसुख चरण र ४ रिजोलुसन चरण हुन् । प्लाटो फेजमा भएको यौ’नलाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जसमा पुगेपछि व्यक्ति यौ’न त’नावबाट मुक्त हुन्छ । यही बेला मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये सम्भवत: सर्वोत्कृष्ट सु’ख अनुभव गर्छ । यसैलाई चर’मसुख भनिन्छ । Plateau Phase मा महिलाहरूमा यो’निद्वार अझ खुल्ने तथा त्यसवरिपरिको भाग फुलेर अर्थात् ठूलो भएर आउँछ । यसरी योनिद्वार वरिपरिको भाग बढ्ने भएकाले भगां’कुर अलि भित्र दबेजस्तो देखिन्छ भने स्त’नको आकार केही बढ्छ । आधाभन्दा बढी महिलामा अनुहार र छाला रातो (S’ex Flush) हुन्छ । पुरुषले जस्तै यो चरणमा महिलाले पनि आन्तरिक न्यानोपन तथा द’बाब महसुस गर्छन् । मांसपेशीहरूमा त’नाव पैदा हुन्छ, मुटु तथा स्व
ब्वाइफ्रेन्ड सँग ब्रेकअप भयो, अहिले सिंगल छुँ
काठमाडौं / पछिल्लो समय स्टेज तताउने नृत्य कलाकार तथा मोडल हुन्, रुविना अधिकारी । नेपालगन्ज धम्बुजीचोककी रुविनाले महजोडी लगायतका कलाकारसँग ‘नेपाल टुर’ गरिसकेकी छन् । पाँच सयभन्दा बढी स्टेज कार्यक्रम गरेकी उनले २०७० सालमा ‘बर्दिया बाँसगढी महोत्सवमा नृत्य गरेर कला यात्रा थालेकी हुन् ।सरिता खनाल र टंक तिमिल्सिनाको ‘तिम्रो मन चोर्नै पर्ने भो…,’बाट मोडलिङ थालेकी उनले अहिलेसम्म ६०भन्दा बढी भिडियो गरिसकेकी छन् । टिका तारामी मगर र चन्द्र शर्माको ‘बाच्छीले धान खायो,’ अनिता चलाउनेको ‘एन्ट्री मार्यो मायाले,’ जय देवकोटाको ‘रुँदो हो मन,’ हरि विष्टको ‘माइतीको देश,’ भागीरथ चलाउनेको ‘जाउँला बरी लै,’जस्ता भिडियोमा उनी देखिइसकेकी छन् । मोडल रुविना अधिकारीले राजधानी दैनिकसँगको एक अन्तरवार्तामा ‘तिन बर्षको लामो प्रेम सम्बन्ध टुेटपछि हाल कसैको प्रेममा नरहेको र पढाईमा ध्यान दिने बताएकी छिन् ।’ तस्बिर
लकडाउमा सबैभन्दा बढी माग क’ण्डमको, अघिपछिभन्दा ५० प्रतिशत बढी विक्री
विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको छ । यसले बजारमा कतिपय बस्तुको विक्रीमा कमी आए पनि एक चिजको विक्री र माग भने अत्यधिक बढेको छ । त्यो हो क’ण्ड’म, जसको खपत अहिले विश्वभरमा २५ देखि ५० प्रतिशत बढेको छ । भारतीय न्यूज च्यानल आजतकको रिपोर्ट अनुसार भारतमै पनि लकडाउनका क्रममा क’ण्ड’मको माग अत्यधिक बढेको र बजारमा यसको अभाव सुरु भएको छ । लकडाउनका समयमा क’ण्ड’मको विक्री बढेको छ । सागसब्जी, माक्स र स्यानिटाइजर जस्तै अहिले आएर क’ण्ड’मको समेत अभाव हुन थालेको छ । आजतकका अनुसार कैयौं विवाहित जोडी तथा प्रेमी प्रेमिका, जो एकसाथ छन् उनीहरु लकडाउनले घरमै बस्नुपर्ने भएकाले मेडिकल स्टारबाट या अनलाइन सपिंग साइटबाट क’ण्ड’म मगाइरहेका छन् । उनीहरु एक वा दुई पिस नभएर ठूलो प्याकेट नै मगाउने गरेका छन् । त्यस्तै विश्वव्यापी रुपमा पनि क’ण्ड’मको माग बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुक
जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ?
दम्पतिले चाहाँदा चाहाँदै पनि लामो समय सम्म बच्चा नहुने समस्यालाई बाझोपनाको संज्ञा दिईन्छ । हाम्रो समाजले विवाहको लामो समय सम्म पनि बच्चा जन्मिएन भने महिलालाई बाझी जस्ता अनेक लान्छना लागाउँने गर्दछन् । समाजले बच्चा नहुनुमा जहिले पनि महिलाकै समस्याको रुपमा लिन्छ । हाम्रो समाजले श्रीमान र श्रीमती कसको कमजोरीका कारण बच्चा नभएको यर्थात कुरा कहिले जान्न खोज्दैनन् । कतिपय परिवारले बच्चा नजन्मेकै कारण महिलालाई डिभोर्स दिने वा दोस्रो विवाह गरिदिएको घटनाहरु हामिले देख्दै आइरहेका छौं । बच्चा नजन्मनुमा प्रायः महिला नै दोष मानिन्छ तर यो नितान्त गलत कुरा हो । मेडिकल विज्ञानले पनि यो कुरा सावित गरिसकेको छ कि महिला गर्भवति नहुनुमा उसको पार्टनरको पनि उत्तिकै हात हुने गर्दछ । यस्ता छन् महिलामा देखिने बाझोपनाका कारण बाझोपना महिला र पुरुष दुबैमा हुने समस्या हो । त्यसैले अस्पताल आउँदा श्रीमान श्रीमती
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घ’टना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका छन् । अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् । ब्राजिलको यो सहर मात्र होइन रुसमा पनि हालत यस्तै छ । केटाहरुको संख्या निकै कम छ केटीहरुको भन्दा जसका कारण महिलाहरुले जस्तो पाएपनि केटा खोजेर बिहे गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । भिक्टोरियामा १ सय जना महिलामा केवल ९८ जना मात्र पुरुष छन् । अर्थात् पुरुष भन्दा ६० हजार बढि महिला छन् भिक्टोरियामा । यता चीनमा भने महिलाको खडेरी छ र एकल पुरुषहरुको संख्या बढिरहेको छ । भनिन्छ, भविष्यमा चीनका २५ प्रतिशत पुरुष कि त अविवाहित बस
मलाई पनि संस्कारी श्रीमान् चाहियो
मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे युवतीको भन्दा कम छैन। रमाइलो गर्ने उमेरले होइन, मनले हो, चाहनाले हो, रहरले हो भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् उनी। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका १२ हजारभन्दा बढी फलोअर छन् भने उनले बनाएका प्रत्येक भिडिओहरू १५ हजारभन्दा बढीले लाइक गर्ने गरेका छन्। युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका ती भिडिओहरू हेर्दा लाग्छ, उनी भर्खर जवान भएकी छन्, उनको लाउँलाउँ खाउँखाउँको उमेर भर्खरै आएको छ र बल्ल रमाइलो गर्दै जिन्दगीको मज्जा लिइरहेकी छिन्। उनी अहिले सेलिब्रेटी भएकी छिन्। युट्युब च्यानलहरूमा उनका प्रशस्त भिडियोहरू, अन्तर्वाताहरू हेर्न पाइन्छ। उनी चर्चित भने आफ्ना पतिसँगको २२ वर्षे लामो वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद गरेपछि बनिन्। यस अर्थमा उनी २२ वर्षसम्म गुमनाम बसिन्। उनकै शब्दमा भन्दा सम्बन्धविच्छेद भएको दिन उन
श्रीमती लकडाउनले माइत भएको फाइदा उठाउदै श्रीमानले गरे अर्कैसंग विहे
विश्वव्यापी स्वास्थ म’हामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भा’इरस (कोभिड(१९) कारण विश्वका धेरै मुलुकमा लकडाउनको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा छिमेकी देश भारतमा भने निकै रोचक घटना घटेको छ । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै श्रीमानले प्रेमिकासँग बिबाह गरेका छन् । छिमेकी देश भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनादेखि ६० किलोमीटर दूरीमा रहेको दुल्हन बजार क्षेत्रमा श्रीमानले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै प्रेमिकासँग बिबाह गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम आज तकले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ । लकडाउनभन्दा अगाडि गुडिया देवी श्रीमती माइती गएकी थिइन । धिरज कुमार अनुसार उनको अनुपस्थितको फाइदा उठाउँदै आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गरे । उनी माइतीमै रहँदा लकडाउन सुरु भएपछि उनी उतै फ’सिन पछि उनले थाहा पाइन् कि उनका श्रीमान धिरज कुमारले उनको अनुपस्थितको फाइदा उठाउँदै आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गरे । धिरज र गुडियाका १० वर्षका छोरा
यौ’नशक्ति बढाउने घरेलु ५ उपाय !
तपाईको यौ’न जीवनमा धेरै स’मस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले स’मस्याहरु त्यसै लु’काएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नियमित यौ’न क्रि’याकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ से’क्स स्वास्थ्यको दर्पण हो । यौं’न श’क्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले घरेलु उपाय अपानाउदा स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ । अमला दुई चम्चा अमलाको रसमा एक चम्चा सुकेको अमलाको चूर्ण र एक चम्चा शुद्ध मह मिलाएर दिनमा दुई चोटि सेवन गर्नुपर्छ । यौ’न श’क्ति बढाउँछ । अश्वगन्धा दूधमा अश्वगन्धाको चूर्ण आधा चम्चा हालेर बिहान र बेलुकी खाने गर्नुपर्छ । यसले यौ’न शक्ति बढाउनुका साथै शी’घ्रपत’नको स’मस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ । प्याज आधा चम्चा प्याजको रस, आधा चम्चा मह र आधा चम्चा मिस्री
Previous 1 … 141 142 143 … 156 Next